Blog Aha Echiche: Atụmatụ Iji Họrọ De zuru okè Aha N'ihi na gị Blog
Ọkpọ blog nwere ike ịbụ ihe siri ezigbo ike, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ maka ịde blọgụ na ịkọ ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, w nwere ike iji ọtụtụ awa na-atụgharị uche maka aha, naanị iji mejupụta ndepụta nke waardeloos.
Ọfọn, obi dị m ụtọ na ị jụrụ! Ọ bụrụ na ị bụ ụdị kpọrọ asị na-eme aha ma ọ bụ na ọ bụ ihe dị egwu na ya, abịawo m ụfọdụ atụmatụ na usoro iji nyere gị aka ịmepụta ma wepụta aha zuru oke maka gị.
3 Ntuziaka # 3: Jiri Nouns, Werkwoorden, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
3.1 Ntụle nkwa nke ọkwa: Iji Okwu emep matara ma ọ bụ ọchọta Okwu nke Gị
Aha blog gị kwesịrị ịkọ na ụdị ọdịnaya ị na-eme. Waren je een blog over een na-akpọ "Foodie Corner" ma ọdịnaya gị bụ maka ịtụle ihe gbasara ntutu isi maka ụmụ nwoke, ị ga – eme ka ndị na – agụgụ ihe na –
Ọ bụrụ na ị chọrọ malite blog nri, ị ga-eji okwu ndị metụtara nri ma ọ bụ iri nri (ya bụ, snacken, veganistisch, gezond, chomping, wdg).
Blog bụrụ na blog gị banyere usoro azụmahịa, ị na-eji isiokwu ndị metụtara ụlọ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ jiri okwu nkwekọrịta (dịka SEO, ahịa dijitalụ, SEM wdg).
Ka anyị kwuo na ị na-eme blọọgụ nri. W nwere ike ikpebi na ọtụtụ ọdịnaya gị ga-abụ isiokwu ndị na-esonụ: Nri, nri siri ike, veganistisch, mmega ahụ, obi ụtọ, ntụziaka, na ihe oriri.
Tinye okwu ndaurus ahụ n’ime thesaurus.com na ị ga-enweta okwu ndị d n ka nri, nri, ọhụụ, mma, ọṅụ, goodies, nri, munchies, ike, obi, groenten, na obi ụtọ. Tinye ụfọdụ okwu ndị ahụ ọnụ (dị ka vegan munchies of Kwado nri nri) na voila, w nwere aha maka blog gị.
Mgbe ọ nọgidesiri ike na-eche echiche maka okwu iji aha gị blog, w nwere ike iji thesaurus mee ihe ngwa ngwa maka ndepụta okwu.
Ntuziaka # 3: Jiri Nouns, Werkwoorden, ma ọ bụ Ọbụna Okwu Nkọwa Na-ekwu Banyere Gị na Ọdịnaya Gị
W nwere ike ikpebi na iji thesaurus ahụ zuru ezu, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu gị na ọkwa ọzọ, malite na-agbakwụnye mkpụrụ okwu, okwu werkwoorden na / ma ọ bụ nkwa.
Ntinye ederede, werkwoorden, na okwu ịkọwapụ nwere ike ịmezie ahazi aha gị, na-eme ka ọ bụrụ nke gị. Ọzọ, ọ na-enyere aka izere iji ihe ntanetụ na saịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ yiri nke gị.
Site na nchịkọta ihe oriri, w nwere ike itinye okwu okwu ma ọ bụ nkọwa ndị na-adabere na gị dịka blogger, nke nwere ike ịbụ: onyeisi, nwa okorobịa, nwa agbọghọ, onye mbido, nri, nri, n n, , nri ehihie, ụlọ ọrụ, wdg
Debe ha ọnụ na ị ga-enweta ihe bara nnukwu uru dị ka nri ụmụaka kwesịrị ekwesị, vegan boss munchies, ntụ ụka kichin ọhụrụ, ma ọ bụ ụlọ oriri na-edozi ahụ.
I nwedịrị ike ime ya ka ọ gbakwunye ma gbakwunye ihe ngwa ngwa ma ọ bụ okwu dịgasị iche iche ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche. Ụfọdụ ihe atụ ga-abụ: ntụziaka nwa agbọghọ kwesịrị ekwesị, na-eri nri nri n’oge nri, ndị na-aṅụrị ọṅụ, dị mma ma dị ọhụrụ.
Ntụle nkwa nke ọkwa: Iji Okwu emep matara ma ọ bụ ọchọta Okwu nke Gị
Maka ndị nwere mmasị, ị nwere ike ịnwale ịmepụta ma ọ bụ mepụta okwu ọhụrụ ọ bụla ị ga-akpọ aha gị na blog gị.
Atụla egwu wnwale ụdị okwu ọbụla ma nwee obi ụtọ na ya. W nwere ike imeri aha dị mma nke ọ na-adịghị onye ọ bụla chere!
Ihe dị ukwuu banyere Wordroids bụ na ị nwere ike ịtọ ókè gị na okwu gị, kọwaa àgwà nke okwu ahụ, setịpụ ụkpụrụ ya, na ọbụna gụnyere ngalaba aha nnweta. Nke a pụtara na ere nwere ike ịchọpụta ma aha ịchọrọ ịdenyere aha na .com ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ewepụta nchekasị nke ịmepụta ihe dị egwu ma chọpụta na e ya ya.
Cheta, enweghi iwu ndi siri ike mgbe abia ime aha. Ọ bụrụhaala na ị hụ na ọ na-ejikọta ọdịnaya gị, w nwere ike ịbụ ihe okike dị ka ịchọrọ!
Ozugbo wet nwetara nke ahụ n’ụzọ debanye aha gị blog ngalaba, ị na-elekwasị anya n’ihe ndị ka mkpa dị ka ede ederede epic na eto eto gi.